Akwụkwọ Ozi Mbụ E Degaara Timoti 6:1-21
Ndị ohu kwesịrị ịna-akwanyere ndị nna ha ukwu ùgwù (1, 2)
Ịhụ ego n’anya na ndị na-akụzi ihe na-abụghị eziokwu (3-10)
Ihe Pọl gwara onye nke Chineke ka ọ na-eme (11-16)
Na-arụ ọtụtụ ọrụ ọma (17-19)
Ahapụkwala ihe i si n’aka Chineke nweta (20, 21)
6 Ka ndị ohu jiri obi ha niile na-akwanyere ndị nna ha ukwu ùgwù,+ ka a ghara ikwu okwu ọjọọ gbasara ihe Chineke na-akụziri anyị nakwa gbasara aha ya.+ 2 Ka ndị ohu ghara iji maka na ndị nna ha ukwu bụ ụmụnna hapụ ịna-akwanyere ha ùgwù. Kama, ka ha jiri obi ha niile na-agbara ha ohu, n’ihi na ọ bụ ụmụnna na ndị ha hụrụ n’anya ka ohu ha na-agba na-abara uru. Na-akụziri ha ihe ndị a, na-agbakwa ha ume ka ha na-eme ha. 3 Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-akụzi ihe dị iche n’ihe a, ọ bụrụkwa na onye ahụ ekwereghị eziokwu a na-akụziri anyị,*+ nke si n’aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ma ọ bụ na o kwereghị ihe a na-akụziri anyị gbasara otú anyị kwesịrị isi na-efe Chineke,+ 4 ọ dị mpako, ọ naghịkwa aghọta ihe ọ bụla.+ Ihe ọ na-emekwa mgbe niile bụ ise okwu na ịrụ ụka.+ Ihe ndị a na-eme ka mmadụ na-eme anyaụfụ, na-ese okwu, na-ekwutọ ndị ọzọ,* na-enyokwa ha enyo. 5 Ọ na-emekwa ka ndị obi ha na-adịghị ọcha,+ ndị jụkwarala eziokwu, na-esekarị okwu n’ihi ihe ndị na-abaghị uru. Naanị ihe mere ụdị ndị a ji na-achọ ife Chineke bụ uru ha ga-erite.+ 6 N’eziokwu, ọ bụrụ na mmadụ na-efe Chineke, ihe o nwere ejukwa ya afọ, ọ ga-erite ọtụtụ uru.+ 7 N’ihi na mgbe a mụrụ anyị n’ụwa a, ọ dịghị ihe anyị wetara. Anyị nwụọkwa, ọ dịghị ihe anyị na-ewere.+ 8 N’ihi ya, ihe oriri na uwe* anyị nwere kwesịrị iju anyị afọ.+ 9 Ma, a ga-anwata ndị kpebisiri ike ịba ọgaranya, ha ga-amakwa n’ọnyà.+ Ihe ọjọọ ga na-agụ ha agụụ. Ha ga na-akpakwa àgwà ka ndị na-amaghị ihe. A ga-ejikwa maka ihe ndị a bibie ha, laakwa ha n’iyi.+ 10 N’ihi na ịhụ ego n’anya bụ mgbọrọgwụ ụdị ihe ọjọọ niile. O meela ka ụfọdụ ndị dapụ n’okwukwe, meekwa ka ahụ́ niile na-afụ ha ụfụ ka ndị mara onwe ha mma aghara aghara.+ 11 Ma gịnwa, onye nke Chineke, gbaara ihe ndị a ọsọ. Gbaa mbọ ka ị na-eme ezi omume, na-efe Chineke, nwee okwukwe, hụ ndị ọzọ n’anya, na-atachi obi, dịrịkwa nwayọọ n’obi.+ 12 Lụọ ezigbo ọgụ Ndị Kraịst na-alụrụ okwukwe ha. Jidesie ndụ ebighị ebi aka ike, nke Chineke họọrọ gị ka i nweta, nke ị kọọrọ ọtụtụ ndị gbasara ya. 13 Ana m agwasi gị ike n’ihu Chineke, onye na-eme ka ihe niile dịrị ndụ na-aga, nakwa n’ihu Kraịst Jizọs, onye nọ n’ihu Pọntiọs Paịlet+ gbaa ezigbo àmà, 14 ka ị na-edebe iwu otú ga-egosi na aka gị dị ọcha, otú ndị mmadụ na-agaghịkwa ahụ ihe ha ga-eji kwujọọ gị, ruo mgbe Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ga-egosi ebube ya.*+ 15 Ọ bụ onye obi ụtọ, naanị ya bụkwa Eze Ukwu. Ọ ga-egosi ebube ya n’oge a kara aka. Ọ bụ Eze ndị eze na Onyenwe ndị nna ukwu niile.+ 16 N’ime ha niile, naanị ya bụ onye na-enweghị ike ịnwụ anwụ.+ O bikwa n’ìhè nke a na-enweghị ike ịbịa nso.+ Mmadụ ọ bụla ahụtụbeghị ya. Mmadụ ọ bụla agaghịkwa ahụli ya.+ Ka a na-asọpụrụ ya, ka ọ dịkwa ike ruo mgbe ebighị ebi. Amen. 17 Na-agwa ndị bara ọgaranya n’oge a* ka ha ghara ịdị mpako, ka ha gharakwa ịtụkwasị akụnụba a na-ejighị n’aka obi,+ kama, ka ha tụkwasị Chineke obi, onye na-enye anyị ihe niile na-akpa anyị mmaji kwuru mmaji.+ 18 Gwakwa ha ka ha na-eme ihe ọma, na-arụ ọtụtụ ọrụ ọma, na-emesapụ aka, na-enyekwa ndị ọzọ ihe.+ 19 Ha ga-esi otú ahụ na-akpakọta akụ̀ n’ebe Chineke nọ, na-atọkwa ezigbo ntọala maka ọdịnihu,+ ka ha nwee ike ijidesi ndụ nke bụ́ ezigbo ndụ aka ike.+ 20 Timoti, ahapụkwala ihe i si n’aka Chineke nweta.+ Egekwala okwu na-enweghị isi ndị e ji ekwulu Chineke nakwa ihe ndị chere na ha ma ihe na-echepụta, ma ihe ha ma abụghị* eziokwu.+ 21 Ụfọdụ na-eji ihe a ndị mmadụ na-echepụta akpa nganga, ya emee ka ha dapụ n’okwukwe. Ka Chineke meere unu amara.
^ Ma ọ bụ “ihe bara uru a na-akụziri anyị.”
^ Ma ọ bụ “na-akparị ndị ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “ụlọ.”
^ Na Grik, “ga-apụta ìhè.”